Nzira yekuwana nekushandisa Microsoft Edge pamusoro pe: peji peji peji Windows 10
Microsoft Edge ndiyo yakavakwa-in default browser in Windows 10. Mushanduri anogona kunge ari mutsva, asi chaizvoizvo, zviri nani kupfuura Internet Explorer pamusoro pekushandura mapeji akanaka. Apo patinotarisa pane zvisarudzo Edge inouya nayo; zvakajeka, iyo inofananidzwa pakuenzanisa kana ichienzaniswa kune dzimwe mamwe mabheji. Pane zvisiri izvo zvakakwana izvo zviri mberi, uye ndicho chimwe chezvikonzero izvo musikana ari kutamburira kukwikwidzana nevakomana vakuru.
Microsoft Kuronga pamusoro pe: mapirgiji Peji peji
Zvakanaka, saka Microsoft Edge ine pamusoro pe: mapuranga peji iyo yakafanana neyo zvakavanzika mapeji ekugadzirisa mune mamwe ma browsers kufanana Chrome kana Firefox. Zvisinei, vanhu havafanire kutarisira pane zvakawanda zvingasarudzika, iyo imwe dambudziko Edge inofanira kurwisana nayo.
Kuti uwane peji iyi yezvigadziridziro pejiji muEdge browser, unofanira kutora pamusoro pe: mapuranga iri mu-address bar uye hit Enter. Pano iwe uchaona zvirongwa zvakawanda. Cherechedza kuti izvi zviitiko zvekuedza saka unofanirwa kuchenjerera usati wanyatsogonesa kana kudzivisa chero chinhu chiri pano.
Isu tinokurudzira zvikuru kubvumira TCP Kurumidza Kuvhura nekuda kwekukurumidza kutakura mawebsite. Zvinoratidzika kushanda kwatiri, uye zvinogona kunge zvichishandawo zvakanaka iwe varume. Kana ukashandura mamwe maitiro uye usingadi mhinduro, unogona kugara uchirova Dzorerazve mapegi ose kuti asvike bhatani.
Zvinotarisirwa kuti, pamusoro pe: mapeji peji haatauri zvakananga muEdge, saka, vashandisi vanofanira kutanga vazive nezvazvo vasati vashandise. Kubva pane zvatinogona kutaura, vashandisi vakawanda veMicrosoft Edge havazivi kuti iripo, asi tinotarisira, mushure memashoko aya, zvinhu zvichachinja.
Iyo software giant iri kuchinja maonero ayo
Tichitarisa pamusoro pezvo: mapuranga nzvimbo, tinogona kuona zvose zvingasarudzwa panguva imwe chete. Zvisinei, Microsoft inofamba kuti iite zvimwe zvigadziriro pano zvinogona kubvumira kunzwisisa nyore nekufamba.
Iwe unoona, kambani inoda kuvanza zvimwe zvezvinhu nekukanganisa. Chero ani anomhanya achangoburwa Windows Insider Vaka vachazvionera vega kuti dzimwe sarudzo dzakavanzwa. Iyo kambani ingango chengetedza zvinhu nenzira iyi yeiyo Vanogadzira Vagadziri Gadziriso.
Kuti uone zvakavanzika zvinowanikwa, vanhu vanodiwa kudivi rebhokisi, Ctrl-Shift-D kuti azarure zvose zvavo.
Izvi ndizvo zvinosarudzwa zvisingarati zvichitarisa kuburikidza nezvayo pamusoro pe: mapeji peji
Nyora kuiswa uye kugadzira mapegi
Iva nemugove wekushandisa kuburikidza nemitsva yekuisa itsva
Svitsai itsva InsertParagraph murairo
Bvumira TFS3 kutevedza
Ita kuti WinRT Clipboard APIs iite
Dzvitsa chikumbiroKutauriraFrame callbacks nokuda kwemafresi-mavhesi emitambo kana zvisingaoneki
Shandisa setTimeout uye setInterval kusvika ku1 yechipiri nguva dzepamusoro-shanduko dzinotsika kana isingaoneki
Rega mabheti ekutora kuti aiswe muzasi yemagetsi
Shandisa setTimeout uye setInterval kusvika ku30 seconds pamashure ematunhu pane 1 yechipiri
Shandisa setTimeout uye setInterval kusvika ku-30 masekondi pane zvisingaoneki zvitsva-ma-iframes panzvimbo ye 1 yechipiri
Shandisa mufananidzo wehuwandu kune 30 fps panzvimbo ye 60 fps
Dzoka high frequency script timers, kumanikidzira script ters kusvika kumafreji akawanda e16ms
Shandisa setTimeout uye setInterval kusvika ku1 kechipiri apo peji iri kutengesa
Rega iyo inopa pipeline kuti iite maitiro ekuvandudza hupenyu hwebheteri
Ita kuti Screen Capture iite
Bvumira TCP Fast Open
Rever hover uye mafambiro ekushanda kune mavara anowanikwa nechinhu
Mamwe mairi akavanzwa mukati: mapuranga haafaniri kunge ari nyaya yevashandisi vepamusoro, saka tinotarisira kuti zvose zvinopfuurira sekutanga. Enda kune peji yeVaduku peji pano uye tsvaka mamiriro acho ezvinhu kana uchida ruzivo pamusoro payo. Uye kana iwe uchinzwa uchida, ipapo iyi sarudzo ichakuratidza iwe disable pamusoro pe: mapeji peji muEdge.
Iyi chinyorwa chinoratidza zvimwe zvinobatsira Zviratidzo zve Chrome
Iyi chinyorwa ichajekesa zvimwe zve inobatsira Firefox pamusoro pe: config tweaks.
Microsoft Edge 97 inoburitsa iine nyowani Citations chimiro nezvimwe
Gadzirisa: Edge Browser Inononoka mukati Windows 10
Dzvitsa InPrivate Browsing Mode MuMicrosoft Edge In Windows 10